Kuthetha ukuthini i-Hydrophobic
Ukuba yi-hydrophobic ngokoqobo kuthetha ukwesaba amanzi. Kwi-chemistry, ibhekisela kwipropati yento ukuze ihlaziye amanzi . Ngokwenene, akukhona ukuba loo nto iphendulwa ngamanzi ngokunjalo nokungahambi kwayo. Imiboniso ye- hydrophobic i-hydrophobicity kwaye ingabizwa ngokuba yi- hydrophobe .
Iimodlekli ze- Hydrophobic zihlala zi- molecule ezingabonakaliyo ezidibanisa ndawonye ukuze zenze i-micelles kunokuba zichazwe ngamanzi.
Iimodlekli ze-hydrophobic zihlala zichithwa kwii-solvents ezingenayo iplastiki (umz., I-solvents).
Kukho izinto ezinama-superhydrophobic , ezinama- angles adibanisa ngamanzi angaphezu kwe-150 degrees. Imibala yalezi zinto ziyakunqanda ukumisa. Ubume bamaconsi amanzi kwiindawo eziphezulu zibizwa ngokuba yi-Lotus, ngokubhekiselele ekubonakaleni kwamanzi kwiqabunga le-lotus. I-Superhydrophobicity ithathwa ngokuba yintlupheko yokuxhatshazwa kwe-interfacial kwaye ayiyiyo yipropati yempahla yecandelo.
Imizekelo yezinto ezixhamlayo
Amafutha, amafutha, i-alkanes, kunye nezinye izinto eziphilayo zi-hydrophobic. Ukuba udibanisa ioli kunye namafutha ngamanzi, umxube uya kuhlukanisa. Ukuba ugubungela umxube weoli kunye namanzi, iiglobules ze-oli ziya kugcina zibambe ndawonye ukuze zinike indawo encinane kumanzi.
Indlela iHydrophoity Works
Iimodlekli ze-Hydrophobic azikhoyo. Xa behlaselwa emanzini, ubunjani babo obungabikho kwemvelo buphazamisa izibopho ze-hydrogen phakathi kwamamolekyuli wamanzi, ukwakha isakhiwo esifana ne-clathrate phezu kwawo.
Isakhiwo silawulwa ngaphezu kweamolekyu zamanzi. Utshintsho kwi-entropy (i-disorder) lubangela iamolekyu ezingabonakaliyo ukuba zihlangane kunye nokunciphisa ukungena kwazo emanzini kwaye ngoko ukunciphisa i-entropy yale nkqubo.
Nangona i-hydrophobic ne-lipophilic ihlala isetyenziswa ngokungafaniyo, la magama amabini ayithethi into efanayo.
I- lipophilic isisithi "sinomnxeba onothando". Uninzi lwama-hydrophobic nazo ziyi-lipophilic, kodwa ngaphandle kwezinto ziquka i-fluorocarbons kunye ne-silicones.
Uchungechunge lweBalmer Inkcazo
Indlela yokulungisa ibhethri efile ye-ATV kwi-Trail okanye kwikampu
Izizathu ezi-5 zokuxhasa iWaterater yakho yoLuntu
Imbali ye-American Bandstand